Laacibka Samuel Eto’o oo Caawa ku biiray Kooxdiisa Cusub.
Loading...	Home Wararka Laacibka Samuel Eto’o oo Caawa ku biiray Kooxdiisa Cusub.
Laacibka Samuel Eto’o oo Caawa ku biiray Kooxdiisa Cusub.	Wednesday, 24 August 2011 00:08	Laacibka weerarka uga ciyaaro kooxda Inter Milan iyo xulka Cameroon Samuel Eto’o ayaa caawa si rasmi ah ugu biiray kooxda Anzhi Mukharkala ee dalka Russia.
Bayaan si rasmi ah uga soo baxay kooxda Inter ayaa lagu sheegay in labada kooxood ay ku heshiiyeen ciyaaryahankan qatarta ah.
“Maanta labada kooxood ee Anzhi iyo Inter waxay ku heshiiyeen saxiixay Samuel Eto’o oo ku wareegay kooxda Anzhi kana tagay Inter Milan,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Anzhi ayaa goor dhaweyd oo caawa ah sii deysay warbixin ay kaga hadashay lacagaha ay ku iibsatay xidigaan afka hore ka ciyaaro, iyada oo sheegtay in ay ku iibsatay €27m halka uu sanadkiiba ka qaadan doono €20.5m.
Eto’o ayaa isla caawa ka dhoofayo magaalada Milan isaga oo tagi doono dalka Russia oo uu dagayo, waxa uu mari doonaa tijaabada caafimaadka maalinta berrito ah markaasi kadibna waxa uu saxiixi doonaa heshiis sadex sano ah.
Marka uu heshiiska saxiixo waxa uu tagi doonaa xarunta kooxda isaga oo bilaabi doono diyaargaroowga kulanka ay kooxda Anzhi la ciyaari doonto kooxda FC Rostov